Ciidamada adeegsada wadooyinka Muqdisho oo digniin adag loo je... | Universal Somali TV
Taliska Booliska Soomaaliyeed ayaa Ciidamada Dowladda ugu hanjabay in hadda ka dib laga qaadi doono tallaabo ka adag middii hore, ciddii muwaadin Soomaaliyeed ku dhibaateysa wadooyinka Magaalada Muqdisho.
Afhayeenka Ciidanka Booliska Soomaaliyeed, Cabdifitaax Aadan Xasan ayaa dadka hubeysan ee baabuurta saaran uga digay inay shacabka ku dhibaateeyaan wadooyinka.
"Dadka hubeysan ee baabuurta saaran waxaan uga digaynaa in muwaadin Soomaaliyeed ee u soo kacay in uu aado tacliin ama u soo kacay in uu arsaaq raadsado in aan lagu dhibaateen jidadka." Ayuu yiri Afhayeenka.
Afhayeenka ayaa ciidamada ugu baaqay inay dulqaad muujiyaan xilliyada uu ciriiriga ka jiro wadooyinka, askarigii muwaadin ku xadgudbaana laga qaadi doono tallaabada ku haboon.
"Baabuurta ay saaran yihiin ciidamada waa inay dulqaad muujiyaan xilliyada mashquulka uu jiro, ciddii ku xadgudubta muwaadin Soomaaliyeed waxaa laga waafajin doonnaa waajibkiisa, waxaana la marin doonnaa tallaabada ku haboon." Ayuu yiri Afhayeenka.
Afhayeenka oo Warbaahinta kula hadlayay Magaalada Muqdisho ayaa intaasi ku daray "Wixii hadda ka dambeeyo tallaabo tii hore ka adag ayaa laga qaadi doonnaa, ciddii muwaadin Soomaaliyeed ku dhibaateysa wadooyinka ay xaqa u lahaayeen inay si nabad ah ku maraan."
Hadalka ka soo yeeray Afhayeenka Booliska ayaa ku soo aadaya, xilli Ciidamada Dowladda, labadii habeen ee ugu dambeysay ay Magaalada Muqdisho ku dileen saddex qof oo rayid ahaa, iyagoo markaasi isku dayaaya inay rasaas ku furtaan jidadka oo mashquul uu ka jiray.
Ciidamada Dowladda ayaa lagu eedeeyaa inay caadeysteen in rasaas ku furtaan wadooyinka, kolka ay saxmad ka jirto, tiiyoo xilliyada qaarkood ay waxyeelo ka soo gaarto dadka rayidka ee lugta iyo gaadiidkaba ku maraya wadooyinka Caasimadda Muqdisho.
Kan-xigaItoobiya oo xireysa Dugsiyada Sare, s...
Kan-horeBooliska oo sheegay in askartii disha...
63,298,164 unique visits